Jaaliyadda Soomaaliyeed ee Mareykanka oo Taageeray Madaxweynaha Koonfur Galbeed “SAWIRRO” – Radio Muqdisho
Xafladan oo ay soo abaabuleen waxgaradka iyo aqoonyahanka ka soo jeeda Gobolada Koonfur Galbeed ee Soomaaliya ee ku nool magaalada Columbus ayaa waxa ay ku muujiyeen taageerada ay u hayaan maamulka cusub ee uu Madaxweynaha ka yahay Shariif Xasan Sheekh Aadan.
Inta badan dadkii ka hadlay ayaa ku dheeraaday marxaladihii gobolada Baay, Bakool iyo Shabeelada Hoose ay soo mareen mudadii ay dalka ka jireen dagaaladii Ahliga ahaa, waxayna ugu baaqeen maamulka cusub in uu la yimaado qorshayaal iyo waxqabad isbadal xanbaarsan, oo ay dadku ku ilooban dhibaatooyinkii ay soo mareen.
Aqoonyahanadii ka hadlay xaflada ayaa ka sheekeeyay Taariikhda dalka iyo xaaladaha gobolada, iyaga oo Madaxweynaha Maamulka Koonfur Galbeed ee Soomaaliya u soo jeediyay in looga fadhiyo in uu goboladaas gaarsiiyo halka ay gaareen maamuladii mudada soo jiray, waxayna dhanka kale qaarkood codsadeen in caasimada maamulka laga dhigo magaalada xeebta ku taal ee Baraawe.
Mas’uuliyiintii munaasabadda ka hadashay ayaa maamulka cusub ugu baaqay in uu wadahadal la yeesho dhammaan dadka ka fikir duwan maamulkan in ay la fadhiistaan si loo dhameeyo kala aragti duwanaanshaha ka dhex jira Siyaasiyiinta ka soo jeeda gobolada uu maamulka Koonfur galbeed uu matalayo.
Arimaha dib u heshiisiinta oo ah mid ahmiyad weyn u leh dadka goboladaasi ayay si weyn ugu cel celiyeen masuuliyiintii ka hadlay oo cod dheer uga codsaday Madaxweynaha maamulka koonfur galbeed Soomaaliya in uu xooga saaro sidii loo heli lahaa dib u heshiisiin dhab ah.
Kooxaha madadaalada oo qeyb ka ahaa xaflada ayaa soo bandhigay cayaaraha hidaha iyo dhaqanka, Heeso wadani, ah Shirib iyo Buranburo.